काठमाडौँमा संक्रमण बढ्दा यातायात खोल्नु ‘झन् जोखिमपूर्ण’ – RemitKhabar
काठमाडौँमा संक्रमण बढ्दा यातायात खोल्नु ‘झन् जोखिमपूर्ण’
by Remit Khabar - 10/07/2020 0
काठमाडौँ- नेपालमा पहिलो पटक माघ १० गते चीनको वुहान सहरबाट नेपाल फर्किएका एक युवकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
पहिलो संक्रमित भेटिएको दुई महिना पछि अर्थात चैत १० गते फेरि दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भयो। दोस्रो संक्रमित फ्रान्सबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजको क्यू आर ६५२ जहाजबाट काठमाडौँ आएकी थिइन्। नेपालमा दोस्रो केस भेटिएपछि सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि तेस्रो धादिङको, चौथो धनगढीको, पाँचौं बाग्लुङको, छैटौँ बाग्लुङको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदै अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ पुगेको छ।
देशका अन्य ठाउँमा संक्रमणको दर घट्दो क्रममा छ भने उपत्यकामा यसको संख्या दिन प्रति दिन बढिरहेको छ। उसो त देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएको लामो समयसम्म उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको थिएन। तर पछिल्ला केही दिन यता भने उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। हालसम्म उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ३ सय ३८ पुगेको छ।
केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अन्य ठाउँमा घट्दै जाँदा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्नलाई विज्ञहरुले उपत्यका जोखिममा रहेको बताएका छन्।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै बन्द गरिएका सर्वजनिक यातायात संचालनमा ल्याउने भएको छ।
संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला उपत्यकामा सर्वजनिक सवारी साधन खुलाउँदा जोखिम कति हुन्छ?
सर्वाजनिक सवारी साधन नचल्दा सबै धन्दा धेरै विरामीहरु मर्कामा परेको कारण सुरक्षा सामग्रीसँगै सावधानी अपनाउँदै सवारी साधन संचालनमा ल्याउन सकिने इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताए।
‘सवारी साधन नचल्दा विरामीहरु उपचारका लागि सहि समयमा अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरुको आवत जावत कष्टकर बनेको छ। उनीहरुले झन्झट खेपिरहेका छन्। उनीहरुले पनि सुविधा पाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘तर सवारी साधनमा चढ्दा मानिसहरु लाइनमा व्यवस्थित भएर बस्दैनन्। उनहरु ठेलमठेल गर्दै यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो भिडलाई व्यवस्थित तगर्न सकिएन भने संक्रमणको जोखिम उच्च रहन्छ। अहिले सरकारले गरेको यो निर्णयमा ‘ग्याप’ देखिएको छ।’
सरकारले जिल्ला भित्र मात्रै सवारी साधन चलाउन पाउने भनेपनि विभिन्न जिल्लाका सिमानासम्म गाडि चलाउन पाउनु पर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘काठमाडौँबाट गाडी मुग्लिङसम्म गुड्न पाउनु पर्छ। डेढ सय किलोमिटरको रेन्ज राखेर गाडी चल्न दियो भने अन्य जिल्लाका मानिसहरु पनि अस्पतालसम्म पुग्नलाई सहज हुने थियो। उनीहरुले समयमै उपचार सेवा पाउने थिए। विकट जिल्लाहरुमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले राम्रो उपचार सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन।’
तर सार्वजनिक सवारी चलाउँदा सावधानी अपनाउन भने अत्यन्तै आवश्यक हुने उनले बताए। उनका अनुसार एउटा सिटमा एक जना मात्र बस्ने, यात्रा गर्ने र बसका स्टाफहरुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने गर्नु पर्छ।
‘यात्रामा क्रममा सवारी साधनको झ्याल खुल्लै छोड्दिनु पर्छ। झ्याल खुल्लै हुँदा बस कुदिरहँदा भित्र बसेका यात्रुहरुले फेरेको स्वास झ्यालबाट बाहिर जान्छ। कोही यात्रु संक्रमित रहेछन् भने पनि उसको स्वास भित्र गुम्सिन पाउँदैन। यसले गर्दा भाइरस सर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ’, डा. मरासिनीले भने, ‘चालक र सहचालक यात्रा क्रमभरि नै क्याबिनमा बस्नु पर्छ। उनीहरु बसेको ठाउँ र यात्रु बस्ने ठाउँको बिचमा स्टिलको पाता र ऐना राख्नु पर्छ। यसले गर्दा उनीहरुले खोकेको वा यात्रुले हाछ्यूँ गर्दा र खोक्दा थुकका छिट्टा एक अर्कामा नपरुन्। उनीहरु यात्रुको सम्पर्कमा आउन हुँदैन। यात्रुहरु उनीहरु भएतिर जानु हुँदैन। किनभने कुनै एक जना यात्रु संक्रमित छ भने ऊसँगै यात्रा गरिरहेका दुईदेखि तीन जना संक्रमित हुन्छन्। तर चालक वा सहचालक संक्रमित छ भने उनीहरुबाट गाडीमा दिनभरी यात्रा गर्ने धेरैलाई सर्न सक्छ। यसो गर्दा संक्रमणको जोखिम कम हुन सक्छ।’
पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा विरामीको उपचारका खटिएका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक, नर्स लगायत अस्पतालका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ।
इमिरेट्स एयरलाइन ले एक तिहाई कर्मचारी कटौती गर्ने